ချစ်သူမကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းလေးကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ထုတ်ပြလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ကောင်မလေး – Cele Posts
ချစ်သူမကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းလေးကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ထုတ်ပြလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့ကောင်မလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မနက်မှာ အဆိုတော် ရေမွန်တစ်ယောက် အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တဲ့ရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါပြီနော်။ အစပိုင်းမှာတော့ ဦးနှောက်ထဲသို့ ဌက်ဖျားပိုးဝင်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေခဲ့ပေမယ့်လည်း နိုဗန်ထူးကတော့ သေချာတဲ့ သတင်းအတိအကျကို ပြောပြလာတာပါနော်။
အဖိုးတန်လွန်းတဲ့ အနုပညာသမားတစ်ဦး ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက အရမ်းကို ဝမ်းနည်းနေကြတာပါနော်။ ဖခင်မေတ္တာငတ်မွတ်ခဲ့ရသူ ဖြစ်တာကြောင့်လည်း အကုန်လုံးက ကရုဏာသက်နေကြတာပါ။ သူ့ရဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်လည်း ရေမွန်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတောင် အတူရှိနေခွင့်မရခဲ့တာကြောင့် ဘယ်လိုမှ ဖြေမဆည်နိုင်အောင်ပါပဲနော်။
ရေမွန်နဲ့ နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ screenshot ကိုလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်တွင် တင်ထားပြီး ” That’s not rumour. It’s true.He said he will love me till the end though i left him.But he’s the one who left me forever right now.I hope this is justanightmare which i can wake up tomorrow and everything’s back to normal.You said you wanted to marry me and we gonna live together so???Now you didn’t even say the last goodbye to me.You are loved and you will be missed, love of my life.#စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သာချန်ခဲ့ ” လို့ ရေးထားပါတယ်နော်။
ခဈြသူမကှယျလှနျမီ နောကျဆုံးပွောခဲ့တဲ့ မှတျတမျးလေးကို ကွကှေဲဝမျးနညျးစှာနဲ့ ထုတျပွလာတဲ့ ရမှေနျရဲ့ကောငျမလေး
ပရိသတျကွီးရေ ဒီနမေ့နကျမှာ အဆိုတျော ရမှေနျတဈယောကျ အစာအိမျသှေးကွောပေါကျတဲ့ရောဂါကွောငျ့ကှယျလှနျသှားခဲ့ရပါပွီနျော။ အစပိုငျးမှာတော့ ဦးနှောကျထဲသို့ ဌကျဖြားပိုးဝငျတယျလို့ သတငျးတှထှေကျနခေဲ့ပမေယျ့လညျး နိုဗနျထူးကတော့ သခြောတဲ့ သတငျးအတိအကကြို ပွောပွလာတာပါနျော။
အဖိုးတနျလှနျးတဲ့ အနုပညာသမားတဈဦး ကွှလှေငျ့သှားခဲ့ရတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကေ အရမျးကို ဝမျးနညျးနကွေတာပါနျော။ ဖခငျမတ်ေတာငတျမှတျခဲ့ရသူ ဖွဈတာကွောငျ့လညျး အကုနျလုံးက ကရုဏာသကျနကွေတာပါ။ သူ့ရဲ့ကောငျမလေးဆိုရငျလညျး ရမှေနျရဲ့နောကျဆုံးအခြိနျမှာတောငျ အတူရှိနခှေငျ့မရခဲ့တာကွောငျ့ ဘယျလိုမှ ဖွမေဆညျနိုငျအောငျပါပဲနျော။
ရမှေနျနဲ့ နောကျဆုံးပွောခဲ့တဲ့ screenshot ကိုလညျး ဆိုရှယျမီဒီယာထကျတှငျ တငျထားပွီး ” That’s not rumour. It’s true.He said he will love me till the end though i left him.But he’s the one who left me forever right now.I hope this is justanightmare which i can wake up tomorrow and everything’s back to normal.You said you wanted to marry me and we gonna live together so???Now you didn’t even say the last goodbye to me.You are loved and you will be missed, love of my life.#စိတျဖွောငျ့ဖွောငျ့နဲ့သာခနျြခဲ့ ” လို့ ရေးထားပါတယျနျော။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သေဆုံးသွားတာကြောင့်Profile လေးကို အနက်ရောင်ချိန်းကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်